Antony fifandraisana lehibe - Ny LAHATSARY amin'ny CHAT maneran-tany! Ny firenena rehetra, vahiny, ny tontolo izao.
Antony fifandraisana lehibe
Izany fahorian-tsaina tanteraka
Nefa mahatonga ny Misokatra ho an'ny rehetra ny fahafaha-tandremo SambatraNa iza na iza no mbola tsy nahita fitiavana lehibe, tsy Mahalala ny tsara kokoa. Ny fitiavana taty aoriana, izany no mahatonga, angamba, ho tia na dia mafy.
Afa-Tsy Ny Herim-Po.
Izay mianatra ho an'ny h ho fantatra, afaka ny ho tonga eto tsy misy ny adin-Tsaina na ny fanerena ara-tsosialy n. Ny biolojika famantaranandro sy ny ray aman-dreny dia mbola ticking, antoka apertures matetika tsy manana ny ratsy toro-hevitra amin'ny safidy ny mpiara-miasa, satria ireo rehetra nandray Anjara mieritreritra fa misy zavatra mbola ho avy iray hafa. Izany ny Fahatoniana angamba no iray amin'ireo mpandraharaha ny tombontsoa mafy orina ny fiaraha-miasa amin'ny tanora taona. Na dia toy ny olana mahazo Manambady na ny ankizy dia ny mangina mozika ny ho avy. Tsy manana fotoana ho an'ny tenanao sy ny fiaraha nahafinaritra.
Izay niditra ny efa mafy orina ny fiaraha-miasa izay efa hita ho an'ny h, ny zavatra maro ny olona nofy: manokana ny fitiavana.
Jereo ny manodidina anao: firy ny olona mitady ny Tsara indraindray tsy fahombiazana. Ny mahita ny olona, ny tsara mendrika ny fanomezam-pahasoavana dia tsy tokony handà. Izay raha ny marina dia antsoina hoe ny finoana eo amin'ny fiainana, ny fifandraisana mafy orina, sy ny fahalalahana miteny indray. Ny akaiky kokoa sy milamina kokoa ny fifandraisana, ny lehibe kokoa dia ny hatoky tena. Ary iza no afaka aoka ny olon-tiantsika iray, toy ny mahazatra tahaka ny tenanao, koa izany no fotoana (ny enim-bolana any ivelany sy ny fiovana eo amin'ny Vahiny smooch tafiditra).
Mieritreritra aho hoe: Izay tia azy, efa ela
Ny zavatra vita amin izany, manan-danja ihany koa ho an'ny ny fifandraisana. Hoe tokony hanambady tokana dia mankaleo. Koa, ireo fitsarana an-tendrony dia diso. Fa ara-traikefa afaka mampitombo amin'ny marin-toerana, mandritra ny fotoana maharitra ny fiaraha-miasa amin'ny tsara kokoa, na dia voaporofo ara-tsiansa. Ny firaisana ara-nofo fanandramana afaka miaina avy maro amin'ireo tsara indrindra miaraka amin'ny Mpiara-miasa mahatoky sy talohan'ny tokony ho menatra na inona na inona. Ny hevitra ny bibidia, lehibe ny Firaisana ara-nofo nandritra ny Alina Iray Mijoro mety ho avy ny lohataona Hollywood, afa-tsy ny rarest ny toe-javatra avy amin'ny tena fiainana. Fifandraisana mafy dia manome ny fiarovana sy ny ara-tsaina ihany koa ny fahamarinan-toerana. Ianao no mandray soa avy amin'ny taona eo ary indrindra. Ny fiainana ankehitriny farany mampientam-po ampy. tsy tapaka ny fo fanaintainana sy ny ratram-Po no tena mampiasa na iza na iza. Izay tonga tanora, tsy ny adin-Tsaina amin'ny Taloha mpiara-miasa, na ny ankizy izay nentina ho any amin'ny fifandraisana. Na ratsy ny zavatra niainany tamin'ny mpiara-miasa hafa fa nandao ny fihetseham-po voadona sy ny ahiahy momba ny tena fitiavana. Tanora mpivady mandeha manavakavaka an-fifandraisana. Izany fotsiny ianareo roa. Ary izany no tsara indrindra ny toe-draharaha ho an'ny filaminana. Tamin'ny taona lasa teo, ary betsaka ny zava-mitranga. Na iza na iza izay niaina nandritra izany fotoana izany, miaraka amin'ny Mpiara-miasa tsy tapaka, dia afaka ny dingana tsy ny amin'izao fotoana izao, Za-draharaha tsara kokoa, saingy koa ny taty aoriana, ny olona iray eo anilany, izay tsy dia hizara ny tantarany. Mahafinaritra ny mahalala fa misy ny lehilahy izay efa niaraka anao amin'ny dingana rehetra eo amin'ny fiainana, dia tsy mila manazava ny be, ary ny olona dia mahafantatra tsara kokoa noho ny indray ny tanana. Raha ny fiainana lehibe iray ao patters, dia ny fotoana ny lafin-javatra ny tsy fisian'ny entana, ary ny olon-tiany. Ny tanora dia mila saina, ny Asa mitaky ny bursting, namana sy ny fianakaviana, ianao te-hiala. Raha mbola misy be dia be ny fotoana miaraka. Ao ny faha-roapolo taonany izy ireo. Raha toa ka misy ny olana aty aoriana, tamin ny adin-Tsaina, ny fotoana, miara-welding ny fahatsiarovana. Ny fitiavana fotsiny dia tsy latsaka avy tany an-danitra, nefa raha ny marina ny kanto, tsy maintsy miasa.
ho an'ny avara-pianarana eo ianao, manoro hevitra aho Erich Fromm ny boky Ny zava-kanto ny fitiavana.
Fa koa amin'ny tsy ny taratasy mazava tsara: ireo Izay maharitra ihany no tompon'andraikitra amin'ny tenany, dia tsy maintsy indray ny mianatra ny fomba marimaritra iraisana amin'ny olona ny fiainana, ary angamba ny trano mba hizara.
Amin ny fotoana tsara sy ny ratsy fotoana.
Ny fandraisana anjara amin'ny
Besplatno Zabavlja Sa Chat Sobi Svijet Online Chat
adult Dating free video finday mampiaraka afaka mihaona mahafinaritra ny fisoratana anarana amin'ny finday ny sary ny lahatsary amin'ny chat ankizivavy roulette ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny tovovavy taona ny tovovavy ho an'ny Fiarahana lahatsary sary tsy misy fisoratana anarana mametra ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy amin'ny chat roulette anglisy erotic video internet